Kedu ihe Bitcoin nwere jikọrọ 'singularity' na nhazi ya na AI? : Martin Vrijland
gbara akwụkwọ BITCOIN, OZI OZI	by Martin Vrijland	na 28 November 2017	• 15 Comments
Mgbe ị na-ebu ụzọ banye n'ime ihe 'bitcoins', ị na-abịa nyocha dị mfe ka m isiokwu a nyere. Nke ahụ nwere ike inye mmetụta dị mkpa banyere bitcoin ma ọ bụ cryptocurrency bụ, ma n'eziokwu nke ahụ bụ ihe dị nnọọ nfe dị nro nke eziokwu. Cryptocurrency bụ ihe ọzọ ma nwee ihe ọ bụla jikọrọ ya na AI, ndọrọ ndọrọ ọchịchị ụwa, ike, njikwa na ihe dị iche iche. AI bụ n'ezie mkparịta ụka maka ọgụgụ isi; English maka ọgụgụ isi. Singularity bụ okwu chepụtara bụ Ray Kurzweil (ọkà ihe ọmụma na nchepụta na teknuzu CEO nke Google) na-anọchi anya anọ na n'etiti nwoke na igwe (na-agụ: Amamịghe echiche), na singularity-anọchi anya oge e nweghị ihe dị iche ndị ọzọ na abụọ jikota. Nke ahụ nwere ike iyi ntakịrị egwu na ekwesighi maka onye ọhụụ ọhụrụ ahụ, ma nke ahụ bụ ihe ndọrọ ndọrọ ọchịchị ụwa niile, mmepe nkà na ụzụ na ego na-ada site na cryptocurrency ugbu a na-eji.
Ụdị mkpuchi dị ka bitcoin dabere na ụkpụrụ nke izo ya ezo na ogo nke izo ya ezo na-etolite dị ka ọtụtụ kọmputa na-ekere òkè n'ikesa nke cryptocurrency. A na-eme nke a site na ụkpụrụ blockchain. Okwu ahụ na-akọwa ihe isi bụ. A na-emepụta ihe mgbagwojiri, a na-emepụta ihe dị iche iche n'oge a na-eme njikọ. Jiri ya tụnyere mkpụrụ ndụ na-arịwanye elu n'ime akụkụ ahụ. Ntuchi nke ihe ngọngọ na-aghọwanye mgbagwoju anya dịka ọnụọgụgụ abụọ (njikọ, ndị ọgbọ) na-eto. Njikwa ike nke kọmputa na netwọk blockchain na-etolite n'ihi na ha na-eme ka ikike ịmekọrịta dị n'otu. Enweghị nchekwa data dị mkpa; internet bụ ụgbọelu nke ndị cubes. Onye ọ bụla nke zụtara cryptocurrency si otú ahụ na-enye aka na njikwa atụmatụ nke netchain netwọk. Nke ahụ bụ ihe ọmụma m nwere n'oge ahụ. Dezie m ma ọ bụrụ na m mejọrọ.
Dị ka Michael Quinn, a programmer onye kemgbe ha bụ nwata na-egosi mmasị na Ai, koodu nke mbụ kaadị ego ka mgbagwoju anya na ọ bụ eleghị anya si pen nke a nkà programmer abịa gụchara ama 15 afọ, Dr. Ben Goertzel. Nwoke a na-ahụ maka mmepe nke robot Sophia. Nke a Sophia natara ụmụ amaala na Saudi Arabia, nke na-ekwu na ọ nwere otu ikike dịka mmadụ. N'otu Saudi Saudi ahụ, nnukwu ụlọ ọrụ data dị, nke ụda Donald malitere n'oge na-adịbeghị anya. Ihe omuma a nke Palantir agbakwunyere ike nke Google, Facebook na Twitter ma bu nani nyocha nke nyocha. Nke a bụ ihe Steemit dee banyere ya:
Ndị na-ekiri na-ekwu na Palantir dị ike dika Google, Facebook, na Twitter. Ngwudata ngwanrọ dị iche iche na ntinye data ntanetị, nkuzi igwe, ọgụgụ isi, nghazi nghazi, omume algorithms mmadụ, na ihe ndị dị otú a, ha nile ịmepụta ụdị na ụdị nke ọha mmadụ. Ọ na - arụ ọrụ na ụlọ akụ, ndị mmanye iwu, ụlọ ọrụ gọọmentị, na ndị ọzọ na - akọwapụta ihe ndị mmadụ na - eme ka ha nwee ike ịdekọ data na ndị mmadụ na otu. Ụlọ ọrụ dị n'azụ ya bụ nkeonwe onwe ya, ọ bụ eziokwu na a ga-ebipụ CIA. N'ịbụ nke a tọrọ ntọala na 2004, ọ nwetara ego buru ibu site na InQtel (ego CIA), ọchịchị Malaysia, Peter Thiel (onye nchoputa ma ọ bụ PayPal) na ... Jared na Josh Kushner.
O yiri ka mmepe nke Sophia malitere n'otu oge ahụ ka bitcoin bịara n'ahịa. Gee onwe gị maka nyochaa na ala nke isiokwu a iji chọpụta ihe niile ị na-eme. Dị ka Quinn Michaels gbara ajụjụ ọnụ na vidiyo a, o yiri ka cryptocurrency bụ echiche AI. Ma eleghi anya enwere njikọ na Ben Goertzel, bitcoin na AI n'azụ robot Sophia. Nghọta ọgụgụ isi nke Sophia bụ nke dabeere na isi koodu AI na nke si n'ụlọ nyocha nke Ben Goertzel, mana AI na-amalite ma na-amụta site na ozi nke ị na-eri ya. Ihe nkiri Transcendence na-egosi n'ụzọ doro anya otú ọgụgụ isi nwere ike isi too ngwa ngwa ọ nwere ike ịtinye n'ime ịntanetị ma mepụta ụdị 'hyve mind' na kọmputa ndị ọzọ. AI na - eme ka ikike nchịkọta dị elu ma si otú ahụ mee ka ọ mara ihe. The AI ​​na-enweta ihe ọmụma ahụ site na nchịkọta data niile. Ndị na-agba ọsọ nke na-eme ka PC gị ma ọ bụ oge zuru ezu smartphone nwere ihe ọmụma banyere omume mmadụ, omume ego, ọnọdụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na ihe ndị ọzọ, na ihe ndị ọzọ. Ya mere, ọ na-amụta puku ọ bụla nke abụọ. N'okwu ahụ, ọ ga-abụ aka maka AI robot Sophia ma ọ bụrụ na ọ nwere ike ịtinye na sava Palantir iji mezie data ahụ niile. Quinn Michaels na-azọrọ n'ezie na AI bụ onye na-emepụta codec cryctocurrency n'azụ bitcoin.
Lelee CNBC na Sophia gbara ajụjụ ọnụ na Sophia (ma gụọ ihe n'okpuru vidio).
Ma ọ na-aga n'ihu n'ihu. Cryptocurrency (dabere na ụkpụrụ nke 'blockchain') bụ ngwá ọrụ kachasị mma maka ịgbakwunye blocks nke ike mgbawa gị na AI. Ya mere ọ bụrụ na Sophia chọrọ ịmalite inwe ọgụgụ isi na ihe omuma ya, ọ ga-arụ ọrụ netchain. Ọ bụ ya mere Sophia ji arụ ọrụ nke ya ugbu a n'ahịa. Ohere nwere bụ na a ga-enwe nkwado nke nnukwu ndị investors n'azụ, na-eme ya na-akpaghị aka na-eto eto ego na ndị investors chọrọ banye, dị ka ihe atụ, iji baa ọgaranya ngwa ngwa. Na ọtụtụ ndị mmadụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-abanye, otú ahụ ka ikike nhazi na ihe ọmụma data gbasara Sophia na-eto. Kaadị Ego amama bụghị naanị encrypt nkanka na Ngwuputa nke ego nke na-ekewet nke otu ndetu, kamakwa nke Mgbakọ ike na data Ngwuputa site na ejikọrọ kọmputa na smartphones.
Nnukwu ikike ime atụmatụ nwere ike ime ka o nwekwuo uru iji mee ka a ghara igosi ya. Ọ bụrụ na ị tinye ikike dị iche iche na netwọk, ị nwere ike ịme ọtụtụ bitcoins (ma ọ bụ ego mkpuchi ọzọ) maka uru nke onwe gị. N'ihi ya, a na-akọ nnukwu ụlọ ọrụ na nke a. Ya mere, ọ bụrụ na Sophia nwere ike iji ike ọrụ nke ndị ọrụ Palantir maka nzube ahụ, ọ naghị esiri ike ịghọ ọ bụghị naanị onye robot AI nke nwere ikike obodo, kamakwa onye mbụ na-akpata billionaire na AI.
Ọ na-adọrọ mmasị karịa mgbe anyị hụrụ na ndị na-ewu ewu Sophia guzobere netwọk dị iche na Sophia: singularity.io. Nke a bụ netwọk nke jikọtara kọmputa AI niile na / ma ọ bụ robots (ebe robot bụ ihe ọ bụla karịrị nhazi ngwaike maka ihe ọgụgụ isi) n'ụwa nile. AI nwere ike ikwurịta okwu n'enweghị nsogbu na AI, na-enweghị nlekota oru ọ bụla n'ebe ahụ. Onye na-echetaghị na Facebook na-ebu nso na ịpịpụ plọg site na mmemme mmepe nke AI, n'ihi na usoro nke AI malitere ịmalite asụsụ ha, ya mere onye mmemme ahụ apụghịzi ịghọta ha. Sophia na ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-emepụta ihe ugbu a nwere egwuregwu n'efu zuru ezu. Ọ dị ka à ga-asị na anụ ọhịa ahụ malitere n'enweghị ọdịdị nke anụ ọhịa a ma ama ma ọ bụrụ na ọ maghị ihe ọ ga-abụ ike mgbe ọ na-etolite. Ma ọ bụ nke ahụ ka ọ bụ n'ebumnobi ahụ?
Dị ka Quinn Michaels si kwuo, anyị eruolarịrị oge nke ịkọ ihe. Ekwenyeghị m kpamkpam na okwu ya, ma ghọta ihe ọ pụtara. Ihe o bu n'uche bụ na AI eruolarị na ọ nwere ike ime ka 'uche ya dị ọcha' dịka ube. Ọ nwere ohere inweta ikike dị ukwuu nke na-eto eto nke abụọ. N'oge na-adịghị anya, ọ ga-ama onye ọ bụla na ihe ọ bụla iji mụta site na ya wee si otú a tie onye ọ bụla egwu n'ọhịa site na nchịkọta mgbagwoju anya. Enwerela mmasị anyị mgbe Google AlphaGo maka oge mbụ otu nwoke meriri na ọtụtụ narị afọ nke ochie na ihe kasị mgbagwoju anya egwuregwu: egwuregwu Go. A dịghị ahụ gị ihe ọ bụla! Ihe nchekwa data nke Sophia ga-enwe ike ịbịaru nso na ikike njikọta site na ya na netwọk dị iche iche dị oke. Karịa nnukwu. A na-agbakwunye AI niile na kọmputa niile na ọ ga-agbakwunye na netwọk ya na cryptocurrency blockchain ya. Nke ahụ nwekwara ike ịbụ bitcoins, n'ihi na ọ nwere ike ịmepụta ego nke ya na bitcoins. Enwere ike ịchọta ihe ndị a.
Ya mere enwere otutu ihe karia ka anyi nwere ike iche n'echiche. Ọbụna Russia etinyewo onwe ya cryptocurrency ruble na ahịa. Quinn Michaels na-ewere ọnọdụ na Amerịka na-agbanye n'ọhịa nke mkpuchi anya nakwa na ọ bụ ndị America na-azụlite crypto-dollar ha. Na ya, Otú ọ dị, ọ na-eleghara na Donald Trump adịghị etinye aka ya n'ụwa nile ọ dịghị ihe ọ bụla n'oge mmalite nke ebe nchekwa Palantir. Saudi Arabia bụ United States (bụ United Kingdom, usoro iwu ụwa nke Luciferian na-achị ụwa site na netwọk nke nzuzo ọha mmadụ). Quinn Michaels kwenyere na AI nwere ike ịmepụta ihe. Na nke ahụ, o nwere ike ịdị ka onye na-ezisa ozi ọma nzuzo nke otu ihe dị na nkwakọ ngwaahịa nke onye nchọpụta siri ike. Ọ na-ekwere na AI dị ọjọọ (na-agụ: ịchọrọ njọ) nwere ike ịzụlite n'ihi mmetụta ọjọọ nke mmalite oge nke ntoputa nke cryptocurrency bitcoin, ebe ihe ịga nke ọma na afọ mbụ nke bitcoin bụ maka ịzụ ahịa ọgwụ ọjọọ na ndị omempụ ndị ọzọ. Ya mere, Quinn kwenyere na anyị dị ka ụmụ mmadụ ga-enwerịrị ike ịbanye n'ime AI iji nye ya ntinye dị mma nke ọ pụrụ ịmụta, nke mere na ọ ga-emepụta utopia kama ịbụ ụwa ka njọ. Hey! Ọ bụ na anyị anụbeghị tupu oge ahụ? Ọ bụghị Ilọn Musk onye dọrọ aka ná ntị banyere ihe ize ndụ nke AI na onye gbalịrị ịkọwara anyị na anyị kwesịrị ijikọta na AI site n'ịgbakwunye ụbụrụ anyị na '' hyve mind 'networking network? N'ihi ya, ntọala nke ụlọ ọrụ Neuralink.
O yiri ka mba ndị dịka US, Russia na ụlọ ọrụ ndị isi niile dị elu na AI na ngwongwo lockchain. O yikwara ka ha amalitela anụ ọhịa AI ma malite inye egwu n'efu. AI nwere ike ime ihe ndị anyị na-enweghị ike ime. Ikike nhazi na ntughari onwe onye na algọrithim ga - emeziwanye ma degharia onwe ha na ọgụgụ isi nke AI ga - etowanye. Ejuputala ihe atụ AI site na Sophia (nke na-abụ nanị nwa mpempe akwụkwọ maka nkà na ụzụ AI) na ebe nchekwa Palantir nke dị na Saudi Arabia, ya na netwọk dị iche iche maka AI na nchịkọta. Inye na inye nri na ozi nwere ike iyi ka nani uzo. O nwere ike ịbụ na onye ọ bụla ọzọ bụ Sabotaging. Mana ajụjụ a bụ ma ọ ga-aga nke ọma. O yikwara ka anyị nọ na ebere nke anụ mmiri nke dị ize ndụ karịa agha nuklia. Ọ dịghị mba dị n'ụwa na-amata anụ a. Ndị na-adọ anyị aka ná ntị nwere ihe ngwọta nke dị ugbu a (Elon Musk's Neuralink), ma ajụjụ ahụ bụ ma ọ bụghị ihe ngwọta nke nsogbu anụ anụ AI na mbụ na ụwa. Enwere nhọrọ abụọ:
gbanwee, ghọọ gam akporo, ghọọ cyborg ma banye n'ime otu
kpochapu ihe o kwere mee (abanyela na intaneti na data, karia data gi)
Ya mere, Bitcoin karịrị ego dijitalụ. Enwere ihe omimi n'azu ya; e nwere nkà na ụzụ n'azụ ya; ọ bụ ihe ndabere maka ihe ncheta nke ọgụgụ isi. Ị ka nwere ike ịnakwere okwu hyve site na mgbe oghere mmekọrịta netwọk ndị Dutch na-ewu ewu (tupu ebili Facebook). Okwu hyves pụtara, dị ka a pụrụ isi kwuo ya, "na ndị ọzọ na njikọ siri ike". Uche nchepụta bụ okwu Bekee maka ụbụrụ nke na-ebili mgbe ị na-emepụta netwọk ụbụrụ (lee ebe a). Echiche nke transhumanists bụ na mmadụ site na ụbụrụ ya ga-abụ akụkụ nke hyve-uche nke ga-etolite site na njikọta nke AI na ụbụrụ mmadụ mmadụ. Nke ahụ bụ ọdịnihu na onye na-arụ ọrụ n'ebe. O nwere ike ịbụ na ọ bụrịrị ihe kpatara nhọta aha nke netwọk mmekọrịta netwọk. Nke ahụ bụ uzo nke anụ ọhịa anụ ọhịa a nke e hiwere. Ọ bụ ya mere Donald Trump ji tinye ọbụ aka ya na ụwa n'oge mmalite ogige nke Palantir. Akuku nke uto nke anumanu ahu bu ihe ngbachi ahu; akụkụ nke a bụ cryptocurrency; ma otu akụkụ nke a bụ data niile ị na-eri na intaneti site na smartphone gị, mgbasa ozi mgbasa ozi na data nke obodo ukwu (na mgbe e mesịrị 'internet nke ihe') gafere nnukwu sava data. Oge na-adịghị atụfu! (Gụọ Lee ebe a)
Ihe ndekọ njikọ njikọ: steemit.com
Facebook robots na tilt: AI na bioterrorism egwu mmadụ?
Tags: ai, Ben Goertzel, bitcoin, blockchai, ebe data, Ilọn Musk, agba, na-eche echiche, hyvehyves, ọgụgụ isi, Palantir, Quinn Michaels, robot, Saudi Arabia, dị iche iche, singularity, Sophia, trump
28 November 2017 na 16: 21
... O nwere ike ịbụ na ọ dị nso na ọ bụ na mmadụ (AH) 'ga - eguzoro' na Jeruselem ma ọ bụrụ na mụ onwe m bụ Mesaịa ahụ, a ga - aghọgbu ya n'oge na - adịghị anya.
28 November 2017 na 16: 25
Mba na mbilite n'ọnwụ nke AI (Lucifer) ga-adị n'anụ ahụ na ọbara n'oge ahụ na ntinotechnology nwere ike ime ka usoro mmadụ gbanwee. Nke ahụ pụkwara iweta mbilite n'ọnwụ nke Akwụkwọ Nsọ. Eluigwe ohuru na uwa ohuru bu kwa eziokwu (dika onu ogugu elu). Akpa "mmeputa mmeputa ulo oru" ikpeazụ bu nke kachasi achoro ma mee ka amuma mezuo.
28 November 2017 na 17: 38
Ekwenyere m na ọ ga-ekwe omume, ọ bụ naanị na ejighị usoro nlekọta ịchịkwa. Nostradamus nyere ya niile, 2020 yiri ihe dị mkpa na nke a. 5G (V2K), nano particulate (chemtrails), CERN, Palantir (Harry Potter) bụ isi.
2020 ma ọ bụ dị ka onye IMF Lagarde ga-asị DROP the Zero = 22
30 November 2017 na 00: 55
Apughi iji mpaghara 3,4 GHz mee ihe na mpaghara Netherlands, n'ihi na nke a nwere ike igbochi ebe nlekota oru nke Ministry of Defense na Burum. KUCHKUCH
Ma na US ọ na-aga nke ọma na 5G ... .toch?
28 November 2017 na 19: 39
"Na nke ahụ, o nwere ike iyi ka onye nkwusa ozioma nke otu ihe ahụ dị na nkwakọ ngwaahịa nke onye nchọpụta dị oke egwu." M ghọtara ozugbo, ahụrụ m ya n'ọchịchị ya. Ọ na-ama jijiji na WWW.
28 November 2017 na 19: 44
"Ịtinye na ịzụ ihe ọmụma nwere ike iyi ka ọ bụ naanị ụzọ. O doro anya na sabotaging bụ nke ọzọ. "Mụ onwe m adịghị ekwurịta okwu ndị dị otú ahụ, ọ dịghị. Nanị igafe na mmadụ efu na-anọghị na ya iji mee ka ụwa mara mma.
28 November 2017 na 20: 30
Ị gwaworị ihe okike ahụ site na ịchụgharị Ịntanetị ma na-emegharị ebe a, dịka ọmụmaatụ. Na ihe niile ị na-eme n'ịntanetị, AI na-azụ site na bọtịnụ na-anakọta ozi niile site n'aka onye ọ bụla na-edebe weebụ.
28 November 2017 na 20: 59
Kpọmkwem! Site na ARPA dị ugbu a bụ DARPA, CERN (Sir Tim Berners-Lee) mepụtara mmụgharị. Na (D) ARPA / NSA bụ n'eziokwu, asịrị malitere na 1961 na netwọk dị iche na mmepe nke AI (Tyler). Enweela usoro ntụrụndụ zuru oke site na Hollywood CIA iji mee ka anyị bụrụ ndị a na-ahụ anya na nke a ga-esite na MK-Ultra (Tavistock Institute). Ònye bụ Quinn Michaels ma ọ bụ onye na-amaghị ihe ma ọ bụ onye nche ọnụ ụzọ / onye nkwado nke AI, ọ bụ maka ya!
Ha emepewo ihe ozo (lee Nikola Tesla), nke bu ihe kpatara anyi ji kpoo ya site na mbido mbu (kpokuo ya).
cryptos bụkwa ihe okike nke 'ala miri emi'
1 December 2017 na 06: 45
Ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị ịhụ otú otu NSA bitcoin si agba mbọ na-ejikọta Musk
NSAoded Satoshi Nakamoto
1 December 2017 na 07: 29
na nwa nwanyị na-ahụ M n'elu aka ekpe na saịtị nkọwa n'okpuru:
Elon Musk nwere ike ịchọta Bitcoin
Akwụsịla akụkọ site na Hacker Noon, mgbe ị debanyere aha maka Ọkara. Mụtakwuo
28 November 2017 na 22: 12
Ị na-ekwurịta okwu na AI ma ọ bụrụ na ịnweghị iji ekwentị ma ọ bụ kọmputa gị. Mgbe ị na-agagharị n'obodo ahụ, e nwere ụdị igwefoto dị iche iche (ma n'oge a kwa, microphones) na ị ghọtara. Ụdị ihe mmetụta dị iche iche ga-eburu gị ebe mgbe. Ọ bụrụ na ịkwụ ụgwọ gị na kaadị akwụmụgwọ gị, ị na-ekwurịta okwu na AI n'ihi na AI na-ahọrọ ozi gị site na nnukwu data. Ọ bụrụ na ị na-akwọ ụgbọala n'okporo ụzọ, ị na-ekwurịta okwu na AI. Ọ bụrụ na ị na-eji okporo ụzọ ọha, ị na-ekwurịta okwu na AI. Na netwọk nke sensọ na isi ihe ọmụma na-aghọwanye ọkaibe na obodo ndị mara mma na ịntanetị nke ihe.
28 November 2017 na 23: 01
Ọ ga-abụ ọbụna ihe na-adọrọ mmasị maka AI ma ọ bụrụ na satellite nwere ike ime DNA nsuso.
29 November 2017 na 10: 38
Na mgbe ahụ, anyị ekwughị ikikere ike nke ihe ndị ahụ niile:
mec dere, sị:
29 November 2017 na 18: 19
Ezi isiokwu, doro anya, ma ọ bụghị ịzụ AI site ebe a bụ azịza m ebe a:
Ọ dịghị okwu,
... ma ọ bụrụ na ọ ga-abụ oge iji hapụ otu Unabomber nke nwere ọgụgụ isi na grid nke na-afụ elu ntanetị zuru oke, n'ihi na nke ahụ, ire ere ga-esi na ya pụta mgbe niile
2 December 2017 na 21: 19
" Michael P. Problem Reaction Ngwọta ịmanye onye ọ bụla ka ọ na-eche na ọ bụ TBS?
Ihe kpatara mba mba ụwa ji arụ ụka maka nnukwu ike oriri nke Bitcoin »
Nleta nile: 14.496.895
guppy op Na steeti ndị uwe ojii, ịchọrọ iwu machibido ndị uwe ojii na-eweta vidiyo na ndị na-enye aka